नागरिक समाजले उहाँलाई अभिनन्दन गर्नेछ « मेचीखबर
नागरिक समाज बिर्तामोडको आयोजनामा फागुन ११ गते बिर्तामोडमा वरिष्ठ साहित्यकार डा.झमक घिमिरेलाई अभिनन्दन गरिदैछ । अनौठो प्रतिभाको धनी घिमिरेलाई पूर्वमै पहिलो पटक नागरिकको तर्फबाट अभिनन्दन गर्न लागिएको छ । सोही बिषयमा केन्द्रीत रहेर समाजका संयोजक कुवेर (अरुण) श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी ।
साहित्यकार झमक घिमिरेलाई अभिनन्दन गर्दै हुनुहुन्छ नि ?
हो, हामी उहाँलाई अभिनन्दन गर्दैछौँ । अनौठो प्रतिभाको रुपमा झमक घिमिरे अहिले पनि साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुन्छ । साहित्यमा उहाँको अतुलनीय योगदान छ । सिङ्गो समाजलाई डोर्याउन सक्ने क्षमता भएको व्यत्तित्व हो उहाँ । त्यसैले झमक घिमिरेलाई पूर्वकै स्रष्टाको रुपमा झापाली समाजले अभिनन्दन गर्ने जमर्को गरेको हो ।
कहिले र कसरी अभिनन्दन गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले उहाँलाई बिर्तामोडमा फागुन ११ गते भव्य रुपमा सम्मान गर्दैछौं । बिर्तामोडका सवै संघ÷संस्था उद्योगीव्यवसायी, राजनीतिक दल तथा समाजसेवीहरुको प्रतिनिधित्वको रुपमा नागरिक समाज रहेको छ । उक्त नागरिक समाजले उहाँलाई अभिनन्दन गर्नेछ । बिर्तामोडको अतिथि सदनबाट झाँकीसहितको र्याली निकालिने छ । गाडीमा राखेर झमक घिमिरेलाई बिर्तामोड बजार परिक्रममा गराइने छ । कनकाई क्याम्पसमा हुने अभिनन्दन कार्यक्रपछि साँझ अतिथि सदनमै स्रष्टा साँझ आयोजना पनि गरिएको छ । सो कार्यक्रममा नेपाल तथा भारतका नेपालीभाषी साहित्यकारहरु उपस्थिति हुनु हुनेछ । कार्यक्रममा साहित्य र सिर्जनाबारे घनिभूतरुपमा छलफल चलाउने छौं ।
कार्यक्रमको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ?
यो कार्यक्रम साझा हो । किनकि सवै संघ÷संस्था र जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरु यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने छ । त्यसैले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सवैबाट स्वेच्छाले सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ । केही साथीहरुबाट सहयोगको आश्वासन आएकाले कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । कार्यक्रम सम्पन्न गर्न बिभिन्न उपसमिति बनाएका छौं । ती समितिहरुले जिम्मेवारीपूर्वक आ–आफ्नो तरिकाले काम अगाडि बढाएका छन् ।
यो सम्पूर्ण झापाली नागरिकको कार्यक्रम हो । अभिनन्दन गर्न लागिएको व्यत्तित्व मुलुककै सम्पत्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँलाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर सम्मान जनाइदिनु हुन म सवैलाई आव्हान गर्छु । कार्यक्रम भव्यरुपमा सम्पन्न गर्न यहाँहरुको सहयोग र सुझाव हामीलाई आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि कार्यक्रम सफल बनाइदिनु हुन नागरिक समाजको तर्फबाट हार्दिक अपिल गर्दछु ।